umuntu ngamunye lelunga elithile emphakathini. Nokho he ajoyine nenqwaba, futhi kuyisipho ubuntu esiqatha abayobe kakhulu ivelele lonke. Njengomthetho, abantu abanjalo ngokushesha enze indlela yabo ngokusebenzisa iyiphi, ngisho kanzima kakhulu, ameva, ngokuqinisekile iholele umgomo. Isifiso, ubulukhuni, ubuqotho, isifiso njalo futhi yonke indawo ngowokuqala - lawa izibonakaliso umholi abasafufusa. Ngokuvamile, laba bantu kalula yokuthola ulimi olulodwa nokuqonda nomphakathi, bayakwazi ngokuphumelelayo ukukhonza izinkolelo zabo zengqondo, ukuze abanye nje abakwazi ukucabanga ngenye indlela.
Akumangazi ukuthi kungani abantu eqinile futhi elikhanyayo ngokuvamile isihloko simthande nokukhulekela eholwa uquqaba, zingabantu amazing kanye ngokoqobo bakuchazayo ubugagu bakhe. Lolu hlobo deification futhi idealization umholi ubizwa ngokuthi 'ihlelo ubuntu ". Lo mqondo ikakhulukazi liphinyiselwe eSoviet Union. Isibonelo esicace uyisihluthulelo ka Iosifa Stalina, ngubani, naphezu kweminyaka engaphezu Inqubomgomo esiqinile wesi zokuphila yomphakathi kuleli zwe, bekulokhu isihloko lokhu kukhulekela mass. Nokho, ngesimiso sokusebenzela uhulumeni hhayi kuphela kwadingeka izimpawu lokufukula womuntu, elibamba amandla, abanye sverhkachestvami.
Hitler ihlelo ubuntu - ungesinye isibonelo indlela umholi lisebenza abangakwazi ukuthonya izingqondo zabantu, kungathatha isikhundla okuholela ezweni. Ngaphezu kwalokho, sokudumisa, owashiya emlandweni emhlabeni umzila emikhulu yegazi, ebheka phezulu impi enkulu lenqwaba amasosha. Yena ngokoqobo ziphathe abantu nge umqondo wakhe ungcono emncintiswaneni zama-Aryan. Amasosha ebesezilungele walala amakhanda awo impi, ukuze uphile ngokuvumelana naloko abakulindele eJalimane. Kulokhu, amafilosofi abo kwaba ngokunembile yokukhulekelwa kukankulunkulukazi ubuntu ukuthi sandile ngisho nangale isimo esisodwa. Wamukela nasezingqondweni ababusi abaningi ezasekela Hitler seMpi yoMhlaba yesiBili.
Nokho, kuba nale minyaka enzima futhi wegazi, muntu owayengagcina ngxabano samanje, okwabangela cult zobuntu. Lokhu kungenxa yokuthi imibono ye amasosha aseSoviet esenamandla ngokulinganayo. Ngesibindi bamasha enethwa izinhlamvu zezibhamu kanye wafa ngenxa yezwe lakubo, umndeni kanye, yebo, umholi omkhulu. It wafa negama lakhe kukhona amaqhawe wangempela isikhathi impikiswano futhi sina.
Uma okuseduzane lezi zibalo ezimbili phezu sezombusazwe, kungenzeka ukuhlonza eziningi izici ezivamile hlanganani laba babusi ababili alwa kanye uthi. Bobabili ngokuqinile ukuvimbela ukungalaleli umthetho, lapho bona babecabanga. Kulokhu, yokukhulekelwa kukankulunkulukazi ngabanye kulokhu, hhayi kuphela wadlala indima omuhle. Ngezinye izikhathi abantu besaba waphinda kwakulibiza igama nesibongo Thixo wakhe, ngoba isijeziso ezingabekwa zokucindezelwa kwalabo bantu bezingelwa ubani musa hit umholi. Wonke umuntu ejwayelene ekamu elibuhlungu, zabulala abantu abaningi, ngisho nangemva kokuba impi.
Futhi Stalin, Hitler wayethé engasenathonya, abenze isesihlalweni lonke izakhamuzi. Ngakho kokubili umbusi ngokuqinile banamathela injongo ethile, okuyinto ibangelwa nganoma iyiphi indlela. Isiqinisekiso olugqamile lena okuhlushwa aseJalimane. Ihlelo lika-ubuntu abanothando futhi eyingqabavu le sokudumisa wakwazi ukukholisa isidingo nokuqedwa ngokomzimba bonke labo abangabakhe yohlanga oluhlukile. Nokho, abalandeli bakhe babezokwenza neze sinqume bebodwa ungathandi ubudlova. Nokho, njengoba engakwazanga kucace bha, ecacile neqondakalayo lamukele imibono yokungabi nandaba nabantu, njengoba kwenza Hitler.
Ngezinye izikhathi umuntu kuphela bakwazi ngokuphelele ukushintsha inkambo yomlando. Futhi njalo kwenzeka ngcono abantu ohlangothini. Kodwa ngezikhathi ezithile ukuze ubuntu egqamile futhi nontrivial kushaywa zomphakathi imibono yabo, amathemba nokholo into ephakeme.
Unswinyo Komphakathi kanye nezinkambiso